Bangkok Travel Package Discount, Best Deals
Bangkok Travel Package Discount, Best Deals အသေးစိတျ
သင်သိပြီးပြီးလား? B&F Club Card နဲ့ဆို ဘန်ကောက်က ဟိုတယ်တွေမှာ အနည်းဆုံး မြန်မာကျပ်ငွေ (၂) သောင်းကျပ်ကနေစပြီး ဘိုကင် တင်လို့ရနေပြီဆိုတာ….
ဘန်ကောက်ကို သွားဖို့ Plan တွေရှိနေပြီဆိုပေမဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ၊ တည်းခိုရမယ့် ဟိုတယ်တွေ၊ စီစဉ်နေရတာနဲ့တင် လမ်းပျောက်နေကြပြီလား?
မပျောက်ကြပါနဲ့လို့…. B&F Weekly Promotions ကသင့်ဘေးမှာ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ အမြဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်နော်…
ဘန်ကောက်မြို့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန် Breakfast အပါဝင် ဟိုတယ် တည်းခိုခွင့် (2) ညအ်ိပ် (3)ရက်ခရီးစဉ်အတွက် တစ်ယောက်ကို USD (132+++ ) မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ (2) သိန်းဝန်းကျင်လောက်နီးပါးပဲကျသင့်မှာဖြစ်တဲ့ B&F ရဲ့ Travel Package နဲဆိုရင် အချိန်ကုန်လည်းသက်သာ ၊ ငွေကုန်လည်းသက်သာပြီး အလုပ်ရူပ်လည်း သက်သာစေမှာပါ…
ဟိုတယ်တွေကတော့ ကိုယ်သွားရောက်လည်ပတ်မယ့် နီးစပ်ရာနေရာနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဟိုတယ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့ ဈေးကတော့ အနည်းငယ်မျှသာ ကွားခြားမူရှိတာမို့ စိတ်ကြိုက် ဟိုတယ်ကို ဘိုကင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်…
Pratunam Market (ပသူနမ်ဈေး) ၊ Platinum Fashion Mall (ပလက်တီနမ်ဈေး) ၊Central World Shopping Plaza (စင်ထရန်ဝေါ် ဈေး) ၊ လေးမျက်နာဘုရား၊ Baiyoke Sky (ဘိုင်းယုဒ်စကိုင်း) အမြင့်ဆုံးတာဝါ… စတာတွေရဲ့ အနီးတွင်ရှိသော ဟိုတယ်များဖြစ်တဲ့အတွက် သွားရောက်လည်ပတ် သူများအတွက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေစေမှာပါ…
ဒီ Bangkok Package လေးကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ B&F Club Card ကအရှေ့မျက်နှာက Card No နဲ့ အနောက်က Security Code ကို Book Myanmar Hotel ကိုပြောပြပြီးတော့ဖြစ်စေ၊ ရုံးကို Club Card နှင့်တကွ လာရောက်ပြီးတော့ ဖြစ်စေ Booking လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်…
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 099 69910121, 099 69910122 (Viber) , Hot Line (09 895711223 ကို အသေးစိတ်ဆက်သွယ်စုံးစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်